अवुधावी प्रहरीमा जान कहाँ सम्पर्क गर्नुपर्छ ?
Thu, Aug 13, 2020 | 19:55:45 NST
प्रश्न : म युएईको अवुधावी प्रहरीमा जान चाहन्छु । यसका लागि कहाँ सम्पर्क गर्नुपर्छ ?
उत्तर : सोमलाल बाटाजु, निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ - युएई प्रहरीका लागि विभिन्न व्यवसायीकोमा माग आउने गर्छ ।
ती व्यवसायीले राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन गर्न । त्यसमा योग्यता पनि खुलाइदिएको हुन्छ । यदि तपाईं योग्य हुनुहुन्छ भने तपाईंले दैनिक रुपमा राष्ट्रिय स्तरका दैनिक पत्रिकाहरु पढ्नु पर्ने हुन्छ ।